ဝယ်ရခက်တဲ့ PS5 Digital Edition နဲ့ Disc Edition အိုင်စီတီမှာရပြီ ~ The ICT.com.mm Blog
ဝယ်ရခက်တဲ့ PS5 Digital Edition နဲ့ Disc Edition အိုင်စီတီမှာရပြီ
PS5 Digital Edition ကဆိုရင် သင်လုံးဝမျှော်လင့်မထားတဲ့ Gaming စွမ်းဆောင်ရည်အသစ်တွေကို ပေးစွမ်းပေးနိုင်တဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် Gaming Device ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Ultra-high speed နဲ့ SSD ကိုတပ်ဆင်ထားတဲ့အတွက် Loading က အရမ်းမြန်ဆန်တာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
Users တွေရဲ့ Feedback အတွက် Support အပြည့်အဝပေးထားသလို အားလုံးအတွက်ကိုက်ညီမယ့် Triggers ၊ တကယ်ကိုအပြင်မှာ ကြားနေရသလို ခံစားရမယ့် 3D Audio System နဲ့အတူ မယုံနိုင်လောက်အောင်ကောင်းမွန်တဲ့ all-new generation PlayStation games အသစ်တွေကို ကစားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
PS5 Digital Edition က PS5 Console ရဲ့ Disc Drive လုံးဝမပါတဲ့ All-Digital Version ဖြစ်ပြီးတော့ PlayStation Network မှာ Sign In လုပ်လိုက်ရုံနဲ့ ကိုယ်ကစားချင်တဲ့ ဂိမ်းတွေကို PlayStation Store မှာ ဝယ်ယူ Download လုပ်ပြီး ကစားရုံပါပဲ။
Digital edition » https://www.ict.com.mm/prod…/playstation-5-digital-edition
Disc နဲ့ပဲ ကစားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ PS5 Disc Edition လေးကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်နော်။ Digital Edition နဲ့ Performance အတူတူပဲဖြစ်ပြီးတော့ PS4 Games တွေရဲ့ 99% ကို ဒီ PS5 မှာလည်း ဆက်ကစားနိုင်မှာပါ။
Disc edition » https://www.ict.com.mm/products/playstation-5-disc-edition
To Experience the true power of play order here at ICT.com.mm
#ShopICT #Myanmar #1OnlineTechRetailer #PS5digitaledtion #PS5discedition
Newer မီးဖိုချောင်သုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းကောင်းကောင်းလေး ဘယ်မှာရှာရပါ့မလဲ?
Older Gaming Headset ကို အကောင်းဆုံးပဲလိုချင်သူတွေအတွက်!!!